ကလေးသူငယ်များနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအပေါ်မီဒီယာများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု - ၁၀ နှစ်တာသုတေသန (၂၀၀၁) - သင့် ဦး နှောက်သည်ဆန့်ကျင်သည်။
အမေရိကန်ကလေးသူငယ် & ဆယ်ကျော်သက်စိတ်ရောဂါကုသမှုအကယ်ဒမီ၏ဂျာနယ်
Volume ကို 40, Issue 4ဧပြီလ 2001, စာမျက်နှာများ 392-401
ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အပေါ်မီဒီယာများ၏သက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. လွန်ခဲ့သည့် 10 နှစ်အတွင်းထုတ်ဝေသုတေသနစာပေပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့။
ကွန်ပျူတာနည်းပညာနှင့်အတူသုတေသနပြုမီဒီယာအမျိုးအစားရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ရုပ်ရှင်များ, ရော့ခ်ဂီတနဲ့ဂီတဗီဒီယို, ကြော်ငြာတွေ, ဗွီဒီယိုဂိမ်းများကိုများနှင့်ကွန်ပျူတာနှင့်အင်တာနက်ကိုပါဝင်သည်။
ကြိုတင် 1990 မှသုတေသနကလေးများအပြုအမူတွေကိုလေ့လာသင်ယူနှင့်မီဒီယာများကပုံဖော်သူတို့ရဲ့တန်ဖိုးကိုစနစ်များရှိသည်သောကမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ အကြောင်းအရာနှင့်ကြည့်ရှုပုံစံများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ထားပြီးကတည်းကမီဒီယာသုတေသန။
မီဒီယာထိတွေ့မှု၏အဓိကသက်ရောက်မှု, အကြမ်းဖက်များနှင့်ရန်လိုသည့်အပြုအမူတိုးမြှင့အရက်နှင့်ဆေးလိပ်သုံးစွဲခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအရှိန်စတင်ခြင်းအပါအဝင် High-အန္တရာယ်အပြုအမူတွေကိုတိုးလာကြပါတယ်။ မီဒီယာ၏အသစ်များပုံစံများကိုလုံလောက်စွာလေ့လာခဲ့ကြပြီမဟုတ်ပေမယ့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုအစောပိုင်းကအခြားမီဒီယာပုံစံများအပေါ်သုတေသနနှင့်ပျမ်းမျှကလေးက ပို. ပို. ခေတ်မီမီဒီယာနှင့်အတူသုံးစွဲအချိန်ပမာဏကို၏ယုတ္တိ extension ကိုမှတဆင့်မျက်ခြေမပြတ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးနှင့်ဆယ်ကျော်သက် Psychiatry အတွက် 10 နှစ် updates များကိုဒီစီးရီးဇူလိုင်လ 1996 အတွက်စတင်ခဲ့သည်။ ခေါင်းစဉ်အသစ်နှစ်မျိုးစလုံးသုတေသနနှင့်၎င်း၏လက်တွေ့သို့မဟုတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအရေးပါမှု၏အရေးပါမှုကိုအဘို့, Recertification အပေါ် AACAP ကော်မတီနှင့်တိုင်ပင်ရွေးချယ်ထားသည်။ စာရေးသူဟာ5သို့မဟုတ်6အများဆုံးဟောပြောမှုတွေကိုးကားမီခရေပွင့နေရာဟုမေးပြီ။
ဒေါက်တာ Villani, ကနေဒီ Krieger ကျောင်း, 1750 အီး Fairmount ရိပ်သာလမ်း, Baltimore, MD 21231 မှပြန်လည်ပရင့်ထုတ်ရန်တောင်းဆိုမှုများ